Dzidziso: Chengetedza mapassword ako nekuda kweKassass | Linux Vakapindwa muropa
Keepass Dzidziso: Yako Password Maneja
Kutarisira kwepassword kwakakosha kwazvo kuchengetedza masisitimu edu nemaakaundi zvakachengeteka. Nguva dzese dzatinowana mamwe masevhisi uye nekudaro tine mamwe mapassword. Kuve neyetenzi tenzi password yezvikamu zvese chikanganiso chakakomba, nekuti kana vakwanisa kuibira vanozove nekwaniso kune ako ese maakaundi uye zvikamu. Ndosaka zvichikurudzirwa kuve nepassword pasevhisi yega yega, asi izvi zvinoita kuti zvive zvakaoma kuvayeuka vese ...
Uchishandisa mapassword akasimba, akareba anopfuura masere mavara uye nekubatanidza manhamba, mavara madiki, mavara ekumusoro, uye zviratidzo zvakanakisa. Zvakare, aya haafanire kuve akakosha misi, mazita emascot, anofarira nhabvu zvikwata, kana zvimwe, sezvavanogona kuva inofungidzirwa nehukama hwehukama Nenzira yakapusa. Haisi zvakare tsika yakanaka yekuzvinyora pasi mutsamba pasi pekhibhodi kana padhuze necomputer sezvinoitwa nevamwe, sezvo vachigona kuonekwa nevechitatu.
Aya matanho matsva anoita kuti zviome kubata nekuvarangarira zvakachengeteka. Saka, kuva nemapurojekiti akaita saKassass kunobatsira zvikuru. Ndokusaka isu takatsaurira iyi posvo kuti utore mapassword ako, kukudzidzisa iwe kuti ungashandise sei uye kuti iwe ugone kunzwisisa zvakanakira nezvakaipa zvekushandisa iyi software kuchengetedza.
1 Zvakanakira nekuipira:
3 Dzimwe nzira kuKassass:
KeePassX, sezvamunotoziva, iri multiplatform, yakavhurwa sosi uye yakavharidzirwa password password. Zvazvinoita KeepassX ndeyekuchengetedza mapassword zvakachengeteka saka haufanire kuvarangarira. Izvo zvinoita saizvozvo muchimiro chevaviri: username-password, yekutonga kwakakwana kwerudzi urwu rwechikamu. Uine tenzi password unokwanisa kuwana iko kunyorera, gadzira mafaira akavharidzirwa nemapassword ako, chengeta iwo mune yakagovaniswa dhairekitori kana kuvatumira neemail kana uchizvida.
Mukana uyu unogona kutendeuka kuve wakashata, nekuti kana ikachengeta mapassword ako inogona kuve yakanaka yekutarisa kurwisa kuyedza kutora iyo master password uye kugona kuve nemapassword ezvikamu zvese zvemumwe mushandisi. Dzimwe nguva midhiya yeanalogog inogona kuva yakachengeteka kunyangwe iine ruzivo rwemberi sei Naizvozvi ini handisi kureva kuti ndinyore pasi pekhibhodi kana kunama post-iyo padhuze necomputer yekomputa yako ...
Kune rimwe divi isu tine humwe hunhu uye iko kunyorera kuti tigone kugovana mapassword uye kuashandisa kubva chero kwatinoda zvakachengeteka. Inokutendera iwe kusarudza kana yako encryption ichave yakavakirwa pane algorithm ye AES kana Twofish encryption ine 256-bit kiyi. Asi vazhinji vanoti chinhu chega chakachengeteka ikomputa yakabviswa kubva kune chero network uye yakasarudzika kubva pamberi pevamwe mapato.
Kunyangwe AES uye Twofish zviri zviviri zvakavimbika zvakavimbika algorithms, hazvisi zvisina musoro. Iko hakuna kuzivikanwa kurwisa kwakanaka kune brute-simba makiyi kunze kweTwifish, asi izvo hazvireve kuti hakuna kana kana hakuzove. Kune rimwe divi, AES, yakagamuchirwa se yakajairwa nehurumende yeUnited States uye inoshandiswa zvakanyanya neakawanda masisitimu, asi iyo NSA yakazivisa kuti yakachengeteka zvakakwana (sekurwisa kwakaringana kusati kwaonekwa), kunyangwe ivo vasingakurudzire kuti inyore magwaro ehurumende akasarudzika, kuwedzera pakufungidzira kushomeka kunogona kuita mune makiyi 128-bit. (kunyangwe Keepass achishandisa 256bits).
Sezvandinotaura, ese maalgorithms akavimbika chaizvo, asi kune zvimwe zvekufungira pamusoro pesimba ravo. Nekudaro, kunze kwekunge iwe uri une muto wakanyanya uye unonakidza, unogona kuva wakachengeteka neiyi encryption, nekuti havazi vazhinji vanozoda kutambisa nguva kutora password yavo kuti vawane dhata isina kukosha zvishoma. Zvisinei yeuka kuti pane kumwe kurwiswa kunosanganisira nzira dzakananga pane kurwiswa nechisimba brute, neduramazwi, Rainbow matafura, nezvimwe, senge zvemagariro mainjiniya atiri kutaura nezvazvo ...
Kuti uwedzere imwe data, imwe nzira yatinozoongorora pazasi inonzi LastPass, yakave donekada. Vagadziri vayo vaifanirwa kutaura zviitiko zvinofungidzirwa izvo zvakavharira ruzivo kubva kune vashandisi veiyi password password. Uye ndiro dambudziko rakakura rekuchengeta ese mapassword munzvimbo imwechete ... Kana iwe ukachengeta imba yako, garaji, bhizinesi, makiyi emotokari parinhi rinokosha, kuwana kumwe chete kweiyi kiyi mhete kunogona kukupa mukana wekupinda mumba mako, bhizinesi, garaji uye tora mota yako. Chinhu chimwe chete ichocho chinoitika nemapassword.
KeepassX ishanduro yeKassass Password Yakachengeteka, chishandiso chakatanga kugadzirirwa masisitimu anoshanda eMicrosoft Windows, asi chakaiswa kune mamwe masisitimu anoshanda. Yekupedzisira X inoratidza vhezheni yeLinux, asi inogona zvakare kuiswa pane iOS, Android, Mac OS X, uye Windows Foni. Kunyange hazvo shanduro idzi "dzisiri pamutemo", dzinoshanda senge dzepakutanga uye dzakatogadzira zvirongwa zveBlackBerry (KeepassB), Sailfish OS (ownKeepass), Chrome OS (CKP), yevashandisi veMozilla browser yeFirefox (KeepFox), nezvimwe.
Kuisa KeepassX mune yedu distro uye kukwanisa kuishandisa tinogona kutevera izvi nhanho nedanho nhungamiro:
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche download KeepassX.
Sezvawaona, ndeye tarball nekodhi yekodhi. Iye zvino tinofanira kuiburitsa uye kuinyora yako kuisirwa. Kune izvi unogona kutaipa izvi mune terminal. Semuenzaniso yeshanduro 0.4.3 yandakaburitsa muDownloads folda yedistro yangu:
kana zvinogona zvakare (zvinoenderana nekugovera kwako):
Kana iwe ukaona kuti uyu wekupedzisira murairo haushande, edza:
Tinogona ikozvino kutanga kushandisa KeepassX. KeepassX inoshanda nemadhatabhesi, ndipo panochengeterwa mapassword akavharirwa evashandisi pane yedu hard drive. Kuti tinyore pasi mapassword tinogona kushandisa tenzi password uye / kana mafaera ekiyi. Panguva ino tinofanirwa kurangarira kuti hatigone kukanganwa tenzi password, nekuti hatizokwanisa kuwana mamwe mapassword akasara uye kuti anofanira kunge akasimba kuti asaburitse mamwe mapassword ako. Kana iwe ukasarudza iyo kiyi faira, inoshanda zvakafanana neye master password, sezvo iwe uchifanira kupa iyi faira kuna KeepassX kuti ubvise mapassword. Unogona kuva nayo pendrive kana chero sviro yekunze iyo iwe chete yauinayo, nekuti kana ukazvichengeta munharaunda imomo zvinogona kuisa njodzi kana mumwe munhu achinge awana komputa yako. Uye pamusoro pezvose ita shuwa kuti haina kugadziriswa, nekuti hazvishande ...
Kutanga kuchengeta mapassword, vhura KeePassX uye sarudza «Dhatabhesi nyowani»Kubva paFaira menyu. Iyo dialog inovhura ichikumbira iyo password faira kana iyo tenzi password. Pinda uye uzvisimbise zvinoenderana nesarudzo yako.
Iye zvino tine dhatabhesi yedu yemaphasiwedi akagadzirwa. Tinofanira kusarudza muFaira menyu sarudzo «Sevha dhatabhesi«. Iyi dhatabhesi faira inogona kuendeswa kune imwe komputa kana yekunze svikiro uye iwe unokwanisa kuiwana iyo neKassassX uye tenzi password kana password password.
Tinogona kugadzira nekuronga mapassword edu nemapoka. KeepassX ichagadzira, kudzima kana kuigadzirisa kubva ku Mapoka menyu kana kurudyi-kuboka paboka kuruboshwe kwepaneru.
Sezvo "Gadzira Mutsva Mutsva»Tinogona kuwedzera nyowani nyowani. Ichakukumbira zita rinotsanangudza kuti uone kuti ndeipi password inowirirana, zita rekushandisa, uye password. Kana isu tikabvuma, password inochengetwa muboka rakasarudzwa.
Kana yangogadzirwa, inogona kugadziriswa kuti igadzirise kana kuidzima kana zvichidikanwa, pane izvi, tinya pane iyo nyowani nyowani nekona bhatani remakona kana touchpad uye sarudza sarudzo inoenderana nezvaunoda kuita. .
Dzimwe nzira kuKassass:
Pane dzimwe nzira dzakasiyana dzeKassass yemamwe masisitimu anoshanda, asi yeLinux huwandu hwesiyano hwaderedzwa. Imwe yesarudzo dzinonakidza dzeKassassX ndeyeLastPass. LastPass inogona kuiswa pane akasiyana mapuratifomu, uyezve yekuwedzera-inowanikwa kuGoogle's Chrome, Mozilla Firefox, uye Opera mabhurawuza.
LastPass inobata mapassword mugore, uye mashandiro ayo akafanana neKassassX, mauri iwe chete unofanirwa kuyeuka tenzi password kuti utarise mamwe mapassword. Password dzinozonyorwa munzvimbo uye dzinoenderana kune mabhurawuza anotsigirwa kuti awane maakaundi.
LastPass ine shanduro yemahara iyo inoshanda chaizvo mushe, kunyangwe iyo vhezheni yakabhadharwa ine zvakanakira pamusoro peiyi. Mutengo webasa iri $ 1 pamwedzi, saka uchave nekwaniso yezvinhu zvitsva zvePrimiyamu vhezheni.
Imwe nzira ndeyeimwe nzira yeLastPass uye Keepass. Encryptr ndeye gore-based password maneja. Iyo inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira Android uye yeLinux kugoverwa. Mune ino kesi, iri yemahara uye yemahara imwe nzira, chimwe chinhu chisingaitike neLastPass.
Encryptr inonyora uye inodonhedza mapassword munharaunda ne master password, saka maitiro ayo akafanana nehama dzayo dzakatsanangurwa pamusoro. Encrypted ruzivo runogona kuva yakachengetwa mugore uye yakawiriraniswa pakati pechigadzirwa chako uye kuti ugare uine mapassword chero iwe uripo.
Usakanganwa kupindura, siya kusahadzika kwako, kushoropodza kana mazano ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Keepass Dzidziso: Yako Password Maneja
sudo apt-tora kuisa keepassx ...
Mycroft AI ikozvino inogona kumhanya paLinux